स्वास्थ्यकर्मीले कहिलेसम्म कुटाइ खाने ?- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
'हामी स्वास्थ्यकर्मी सीमित स्रोतसाधनमा र अति नै न्यून सेवा सुविधा लिएर नागरिकको जीवन रक्षाका लागि अग्रपंक्तिमा होमिइरहेका छौं। यस्तो परिस्थितिमा के हामीमाथि आक्रमण हुनु पाच्य हो?'
जेष्ठ १७, २०७८ ज्वाला ढकाल
कोरोनाको वितण्डाले देश थला परेको छ । एकातिर प्रशस्त मात्रामा प्राणवायु नपाएर कतिपय मानिसहरू जीवनसँग हार्दै मृत्युवरण गरेका छन् । केही भने तिनैका मृत्यलाई पर धकेल्न आफ्नो भोकप्यास, घर परिवार सबै बिर्सेर रातदिन नभनी निरन्तर खटिरहेका छन् । ती स्वास्थ्यकर्मी हुन्।
नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा शुक्रबार प्रदर्शन गर्दै स्वास्थ्यकर्मी । तस्बिर : रूपा गहतराज/कान्तिपुर
सम्भवत: आज देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरु कोरोनाविरुद्धको युद्धमा एक सिपाही बनेर डुब्नै लागेको एक युगलाई बचाउन होमिएका छन् ।आज देशको अवस्था निकै दर्दनाक छ। यस्तो विषम परिस्थिति छ कि कैयौं कोरोना संक्रमित नागरिकले अस्किजनकै अभावमा ज्यान गुमाउपर्ने स्थिति आएको छ । कतिपय संक्रमितले अस्पताल जानका लागि एम्बुलेन्स खोज्दाखोज्दै र कतिपयले अस्पतालमा बेड पाउने आशामा चर्को शुल्क तिरेर एम्बुलेन्समा घुम्दाघुम्दै ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
यस्तो जटिल परिस्थितिमा स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशील ठाउँमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि जाइलाग्ने कहाँको सभ्यता हो? के स्वास्थ्यकर्मी मान्छे मार्नका लागि अस्पतालमा बसिरहेछन्? यस्तो विषम परिस्थितिमा हामीले पाउने प्रतिक्रिया यही हो? उसो भए बचाउने को छ यहाँ?
हरेक दिन थोरैमा पनि १२/१२ घन्टा, त्यो पनि यस्तो गर्मीयाममा बाक्लो, पोल्ने, खलखली पसिना आउने पीपीई लगाएर मास्कले अनुहारमा घाउ नै हुँदा, भोक र प्यासले प्याकप्याक परेर कतिपय अवस्थामा डाइपर नै लगाएर स्वास्थ्यकर्मीहरु रहरले काम गरिरहेका त पक्कै होइनन् ।
वर्षौंवर्षको लगानी, तपस्या, श्रम के हामीले अर्कोको तितो वचन सुन्न वा लात खानैका लागि गरेका हौं त? यस्ता अप्रिय व्यवहार त्यो किन दोहोरिरहेका छन् ? कहिले हामी स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल परिसरमै आक्रमण र दुर्व्यवहारको शिकार हुनुपर्ने, कहिले भाडा तिरेर बसेको घरबाट लखेटिनुपर्ने, कहिले क्वारेन्टाइन स्थलबाट धपाइने तर फेरि तिनै घाइते, थकित दुर्व्यवहारबाट पीडित स्वास्थ्यकर्मीसँगै हाम्रो उच्च अपेक्षा रहने ।
एकातर्फ आज राष्ट्र कोरोनाको कहरले आक्रान्त भइरहेको छ र अर्कोतर्फ यी जीवन जोगाउन तत्पर स्वास्थ्यकर्मीप्रति भइरहेको तुच्छ व्यवहारले देशको शीर निहुरिएको छ । अन्य क्षेत्रमा सेवा दिने जागिरेहरु यो लकडाउनको बेला घरमै बसेर राज्यको सेवा सुविधा लिइरहेछन् । जनताको सेवा गर्न जनताबाटै चुनिएका व्यक्ति यस्तो परिस्थितिलाई ख्याल नै नगरी कुर्सीको दौडमा लागिरहेका छन् ।
हामी स्वास्थ्यकर्मीहरु सीमित स्रोतसाधनमा र अति नै न्यून सेवा सुविधा लिएर नागरिकहरुको जीवन रक्षाका लागि कोरोना महामारीको अग्रपंक्तिमा होमिइरहेका छौं। यस्तो परिस्थितिमा के हामीमाथि आक्रमण हुनु पाच्य हो? न्याय कहाँ छ? हामी माथि उठ्ने हातहरु कहिले रोकिन्छन् ? हाम्रो सुरक्षा कहाँ छ? यस्को जिम्मा कसले लिने?
-ढकाल निजामती कर्मचारी अस्पतालमा इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्सको रुपमा कार्यरत छिन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ १४:०५
चीनमा अब ३ सन्तान नीति
जेष्ठ १७, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — चीनले दुई सन्तान नीतिलाई खारेज गर्दै तीन सन्तानको नीति अँगाल्ने भएको छ । पछिल्लो समय जन्मदर घटिरहेकाले चीनले अब हरेक दम्पतीले ३ जनासम्म सन्तान जन्माउन पाउने नीति ल्याएको हो ।
समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकले उक्त नीति लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त बैठक राष्ट्रपति सी चिनफिङको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
यसै वर्षको सुरुवातमा सार्वजनिक भएको जनगणनाअनुसार चीनमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.५३ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । जुन १९६० को दशकयताकै कम भएको बताइएको छ । चीनको जनसंख्या १ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ ।
यसअघि चीनले सन् २०१६ मा साढे तीन दशक लामो एक सन्तानको नीतिलाई खारेज गर्दै दुई सन्तानको नीति अँगालेको थियो । दोस्रो आर्थिक शक्तिका रूपमा अगाडि आएको चीन विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश हो ।
चीनले सन् १९८० देखि एक सन्तानको नीति अवलम्बन गरेपछि जनसंख्यालाई कडाइसाथ नियन्त्रण गर्दै आएको थियो । लामो समयसम्म चलेको जापान विरुद्धको युद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध र आन्तरिक गृहयुद्धका कारण बीसौँ शताब्दीमा मात्र चीनले करोडौँ आफ्ना नागरिक गुमाउनुपरेको थियो । त्यसमाथिको भोकमरी र राजनीतिक कोपभाजनका कारण भोगेको आर्थिक नाकाबन्दीले जर्जर बनेको चीनलाई कम्युनिष्ट शासनको सुरुवातसँगै जनसंख्या नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको थियो ।
सन् १९७० मा चीनको जनसंख्या ८० करोड नाघेपछि चीनले १९७५ मा ‘ढिलो, लामो र थोरै’ (लेट, लङ एन्ड फिउ) भन्ने नारा अगाडि बढायो । यसको अर्थ ढिलो विवाह गर, लामो समयसम्म बच्चा नजन्माऊ र थोरै जन्माऊ भन्ने थियो । त्यतिबेलै दम्पतीलाई एकमात्र सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्दै दुईभन्दा बढी सन्तान नजन्माउन भनियो ।
१९८० देखि चीनमा नयाँ वैवाहिक कानुन लागु भयो । यो कानुनमा एकमात्र सन्तान जन्माउन पाउने प्रावधान थियो, जसलाई निकै कडाइसाथ लागू गरिएको थियो । १९८४ मा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सीमित दम्पतीले दोस्रो सन्तान जन्माउन पाउने नीति ल्याइयो । यसमा दम्पती दुवै एक्लो सन्तान हुनुपर्ने सर्त थियो । यसमा केही अल्पसंख्यक जातिलाई पनि दोस्रो सन्तान जन्माउने अधिकार दिइयो ।
उल्लिखित परिधिभित्र नपरेका दम्पतीले दोस्रो सन्तान जन्माएमा कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने थियो । सन् २००१ मा एक सन्तान नीतिको उल्लंघन गरेर बढी सन्तान जन्माउने दम्पतीलाई निकै ठूलो नगद जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधानसँगै सरकारी जागिरे भएमा जागिर खोसिनेसम्मको नियम बनाइयो । फलस्वरूप थुप्रै दम्पती बारम्बार गर्भपतन गर्न र जन्मिएको दोस्रो सन्तानलाई सरकारी पन्जिकाधिकारीकहाँ दर्ता नगराइकन अवैध बच्चाको रूपमा लुकाएर राख्न बाध्य थिए ।
तर पछिल्लो समय चीनमा प्रजनन् दर घटेकाले नयाँ नीति अपनाइएको हो ।
प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ १३:५३